Aadaa – Page 3 – siifsiin
ODUU DURII NAMICHA BARA HIMU
Namticha tokkotu ture . Abbaan isaa bara hima . Abbaan isaa duunaan abbee bara himaa koottuutii bara himi jedhaniin . Namichi sunis akka inni bara himu mootummaan waan dirqisiseef koottuutii bara himi jedhanii fuudhanii deeman .Namtichi sun bara himuudhaaf romaa utuu deemaa jiruu sardiidaa boollarra teessu tokko arge . Achumaan sardiidni sunis maali yaa namana … Continue reading ODUU DURII NAMICHA BARA HIMU